Isincoko sokwabelana ngesondo
Isincoko sokwabelana ngeroulette lithuba lokonwabela isini sokwenene simahla usebenzisa i-roulette yencoko yevidiyo. Akuyi kuba nzima kuwe ukufumana intombazana okanye umfana ngesondo phambi kwekhamera yewebhu kwisixeko sakho. Into efunekayo kukubonisa isini sakho kwaye ucofe ku "Qala uPhando". Emva koko i-roulette yesini ngokwayo iya kuqala ukubonelela ngokukhetha kwiqabane elinokuba sex. Kubafana, i-roulette yencoko yamanyala iya kubonelela ngonyulo olukhulu lwamantombazana engxoxo yesini, kwaye amantombazana afaka amaqabane abo ezesondo phakathi kwabafana kwaye bonwabele le ncoko imnandi.
I-roulette yaseRussia: ukuthandana okungaqhelekanga kwi-Intanethi
Yaziswa ngo-Novemba ka-2009, iChatroulette.com yadubula ubusuku-nje kwiinyanga ezintathu kamva, iimpapasho ezimbini ezinegunya zabhala ngayo: INew York Times kunye neNew York Magazine. Ibali elithethwe ziintatheli lalikhumbuza kakhulu ukufezekiswa kwephupha lokwenyani laseMelika, ke ngoko lathandana nomfundi waseNtshona kwaye wabaliswa kwangoko ngamajelo eendaba aseRussia.
Ibali limi ngolu hlobo lulandelayo: U-Andrey Ternovsky oneminyaka eli-17 ubudala waseMoscow, njengamakhulu abanye abantwana, wenza iwebhusayithi yokunxibelelana nabahlobo bakhe. Umongo wombono yayingekokukhetha umntu oza kunxibelelana naye, njengoko kusenziwa kulo naluphi na uhlobo lonxibelelwano olwaziwayo kuthi, kodwa "ukumngqubeka" kuye ngengozi - ngokoluvo lomyili weprojekthi, kumnandi ngakumbi. Ixesha elingaphezulu, indawo leyo, eyayikade isetyenziswa liqela elincinci labantu, yathandwa. Ilizwi lomlomo lisebenze ngcono kunayo nayiphi na intengiso. Yintoni enomdla ngakumbi kwaye engaqhelekanga kancinci: iprojekthi yafumana udumo lwayo kude nalapho yaqala khona - hayi eRashiya, kodwa kumazwe athetha isiNgesi. Kwisibonelelo se-CIS, oovimba abazange bawele kwicandelo lokujonga abaphulaphuli abaninzi kude kube ngumzuzu xa amajelo eendaba aseNtshona abhala ngawo.
Ke, ngokuchwetheza igama ledomeyini ngoku kwindawo yedilesi, umsebenzisi usiwa kwiphepha elinombonakalo olula. Kwimvelaphi emhlophe-ngwevu, kukho iifestile ezimbini, nganye kuzo inomfanekiso ohanjiswe kwikhamera yewebhu. Ngasekhohlo yi-interlocutor yakho, ngasekunene nguwe. Ewe, ukuze isebenze, kufuneka ube nombhobho, ikhamera kunye noqhagamshelo oluzinzileyo lwe-Intanethi.
Ngokucofa kwiqhosha elithi "uMdlalo oMtsha", uya kubona i-interlocutor yakho kwaye ungathetha naye kancinci, okanye ucofe u "Okulandelayo" kwaye ufumane umntu ongcono. Nangona kunjalo, nokuba wonwabile kwaye ungathanda ukuncokola malunga noku nokuya, ingxoxo inokuma, kuba umntu "kwelinye icala le-Intanethi" unelungelo lokukhetha.
Ukuphendula kwinkonzo elula kangako, ukuba ayisiyonto yakudala bekude ekucaciseni.
Amajelo eendaba aliqela aseRussia kunye neebhlogi ezizodwa ziye zagxeka iCahtroulette.com njenge "ndawo yeempazamo." Esi ayisosigwebo esingenasihlahla. Jonga nje umfanekiso-skrini apha ngasentla ukuze ubone ukuba awukwazi ukubona kuphela ulonwabo, ubuso obonwabileyo, kodwa nento engaqhelekanga. Kwaye kulungile ukuba yingubo yecarnival okanye yinto yokudlala emfusa ethambileyo. Inyani yile yokuba abatyeleli besiza abangenankathalo, besebenzisa ukungaziwa kwabo, bahlala besaphula imithetho esisiseko ebhalwe kwiphepha eliphambili: "16+ kwaye Akukho Bunqunu".
Kwaye "phesheya", ngokuchaseneyo, "utya kwaye udumise". Ngokokuhlalutya kwetrafikhi yewebhusayithi ebonelelwe sisibonelelo seTechcrunch, i-47% yabasebenzisi ngabantu baseMelika, kulandele amaFrentshi ane-15%, kunye nabantu baseCanada kwindawo yesithathu (ngaphantsi kwe-10%). Kwaye oku, ngokubanzi, kuchazeka ngokulula - abameli bala mazwe baqala ngokulula incoko kunye nomnye umntu ohamba naye kwinqwelomoya, ummelwane kwindawo yokutyela, kwaye ngokubanzi bavulelekile kubantu ababaziyo nabancokolayo-ngokungafani nabantu bakuthi.
Ukugcwala kwenani lesiza sele kungaphezulu kwezigidi ezine zabantu ngenyanga, kwaye ukugcwala kwemihla ngemihla kulinganiswa kumakhulu amawaka. Xa uqikelele ukuba bangaphi abantu abakwi-Intanethi umzuzwana ngamnye, kunzima kakhulu ukufumana umntu odumileyo, umntu ekudala ufuna ukunxibelelana naye. Kodwa mhlawumbi. Uninzi lwabantu abadumileyo bayavuma ukuba ngamanye amaxesha bayandwendwela indawo kwaye bachitha nexesha elaneleyo apho.
Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha kwenzeka okwahlukileyo: abanye abantu ababekade bengaziwa bayakwazi ukufumana ukuthandwa ngokwenyani kwehlabathi. Njengokuba, umzekelo, imvumi-yokuphucula umculo uMerton, owafumana amawaka abaphulaphuli abanombulelo kubukhulu benethiwekhi.
Ngokungafaniyo ne-Chatroulette, ejolise kumsebenzisi wangaphandle, iprojekthi ye davaipogovorim.ru inyuselwa ngokukodwa kwi-Runet. Asizukuchaza ukusebenza, kuba iyiphinda ngokupheleleyo inkonzo esele ichaziwe, kodwa qaphela ukuba abaphuhlisi bongeze inkcukacha enye ebaluleke kakhulu: isicelo esikhethekileyo seVKontakte, esiya kukuvumela ukuba uqhube incoko ngaphandle kokushiya "ikhaya" lakho.
Owona mqobo uphambili kubutyebi kunye nokusetyenziswa (kwaye basebenza ngokulandelelana) linani elincinci labasebenzisi. Ngexesha lokuvavanywa, sele kunqakrazo lwesihlanu okanye lwesithandathu ndifuna ukubabaza: "Bah! Bonke ubuso obuqhelekileyo!"
Kutshanje, njengoko umfundi okhathalelayo ekhumbula, enye yeenjini ezinkulu zokukhangela kunye neminyango emininzi yokusebenza - iMail.Ru-ivule eyayo i-analogue yencoko yevidiyo edumileyo. Into enomdla kukuba, ukuba awukhangeli "Khangela kuphela ngekhamera yewebhu" ibhokisi yokukhangela ngexesha, umlamli uya kukhangelwa kungekuphela kwabo basebenzisa inkonzo ngoku, kodwa phakathi kwabo bonke, bonke, abasebenzisi beMeyile.Ru (abo apho zizigidi ezininzi), kodwa Oku kuthetha ukuba kuyakwenzeka ukubukela imifanekiso ye-avatar engashukumiyo ixesha elide. Ngaphandle koko, awuyi kuqaphela umohluko ekusebenzeni.
Le ngxoxo ingacwangciswanga ibonelela ngeendlela ezimbini onokukhetha kuzo: isicatshulwa kunye nevidiyo. Indawo isebenza ngokukhawuleza ngokwaneleyo, baninzi abasebenzisi kwi-Intanethi. Ngaphandle kokufumaneka konxibelelwano lweteksti, bekungekho enye iyantlukwano kwiChatroulette.
IFlytok.ru yinguqulelo enzima kwaye enemibala yengxoxo efanayo yevidiyo. Xa ungena kule ndawo, ngokukhawuleza ubona iifom ezimbini-enye yokungena ngokulula, enye yokubhalisa. Nangona kunjalo, ngexesha lovavanyo, ubhaliso alufuni kusebenza nangayiphi na indlela, njengoko kwenza nesiqingatha sekhonkco zonxibelelwano. Ke kuye kwafuneka siqwalasele kuphela uhlobo "olulula" lwenkonzo kwaye sigxile kwizimvo zoogxa bethu.
Into yokuqala ebamba iliso lakho: oovimba akukho lula njengoko kubonakala ngathi. Ayicaciswanga ngokucacileyo kunye noopopayi, ubhaliso luyafuneka Ayisiyiyo nje yabantu abangaziwayo apha, efuna ukutshintshiselana ngamagama ambalwa, kodwa nabantu abanomdla kakhulu kunxibelelwano. Unokugcwalisa iprofayile yakho, wenze izihlobo, ubukele usasazo, iialbham zeefoto, ufunde kunye nebhlog. Inani labasebenzisi besiza ngokuqinisekileyo lingaphantsi kuneChatouou, kodwa ngamanye amaxesha inokugqwesa enye inkonzo yaseRussia. Le nkonzo isondele kakhulu kwinethiwekhi yoluntu kunohlobo lwayo.
Kukwanokuthethwa okufanayo ngeTinyChat Okulandelayo- ngombandela wokuba sisibonelelo sangaphandle, kwaye uluntu, kunye nabasebenzisi balapho, ikakhulu bangaphandle - le yingxoxo yevidiyo yentlalo. Abantu beza kule ndawo hayi ngomzuzu, kodwa kunxibelelwano olupheleleyo. Ngena, khetha uluntu kwaye uqale ukuncokola ngesihloko. Ukuba uyafuna, ungabhalisa kwaye wenze eyakho indawo kwaye ulinde abanye ukuba bakujoyine. Unokwenza ngaphandle kobhaliso ngokungena kwiakhawunti yakho ye-Facebook okanye ye-Twitter.
Roulette yengxoxo yevidiyo-inkonzo efanelekileyo yokuthandana kwi-Intanethi
Nabani na ozabalazela ubudlelwane obutsha, ofuna ukuthetha ngezihloko ezinomdla, ukwenza izihlobo, ukudibana namantombazana, kufuneka azame indlela elula nefanelekileyo yokuthandana kwi-Intanethi - incoko yeeroulette. Oovimba abakhethekileyo bavula ukufikelela kwizigidi zabasebenzisi be-Intanethi, njengokuba unomdla kunxibelelwano olunomdla, uthando kunye nobuhlobo. Ukukhethwa kwe-interlocutor kwenzeka ngokuzenzekelayo, kunokuba ngumntu ovela eRashiya, eBelarus, eJamani, eUnited States nakwi-Australia.
Incoko yevidiyo kunye namantombazana ivumela abafana ukuba baziqhelanise nezakhono zabo zonxibelelwano nabantu besini esahlukileyo kwaye benze izihlobo zabo kwihlabathi liphela. Kukho ithuba elihle lokuba phakathi kwaba banxibelelanisi abaqhelekileyo kukho imimoya yezalamane. Incoko yeRoulette kunye namantombazana ngumncedisi onokuthenjwa ekufumaneni iqabane lakho lomphefumlo!
Nabani na ikhompyuter ixhotywe ngekhamera yevidiyo, imakrofoni kunye nezithethi banokufikelela kunxibelelwano lwe-Intanethi ngaphandle kwemida. Ngapha koko, sesi sixhobo esenza ukuba usasaze umfanekiso wevidiyo kwaye uqhube incoko.
Akunyanzelekanga ukuba ufake igama, kodwa ingxoxo yevidiyo ibonelela abasebenzisi ababhalisiweyo ngokukhetha ngakumbi kunabantu abangaziwayo. Ukuzibonakalisa ngokukhanya kwakho, kuyacetyiswa ukuba urekhode ividiyo emfutshane eyamkelekileyo.
Ngokucofa iqhosha elithi "Qalisa uPhendlo", ngokuzenzekelayo uba lilungu lenkqubo. Umfanekiso womntu onokuthi ungene ngaphakathi uvela kwincoko yevidiyo: uyabona kwaye umve umntu, uyabona kwaye uyakuva. Ukuba ubuntu be-interlocutor bubonakala bungathandeki okanye bungathandeki, cinezela iqhosha elithi "Okulandelayo" uze uye kumntu omtsha.
Zithini izibonelelo zencoko yevidiyo
Okokuqala, incoko yevidiyo sisixhobo sokufumana abantu obaqhelileyo ukuze unxibelelwano olumnandi nolulula. Iinjongo zokusebenzisa inkonzo yethu kumntu ngamnye othile zinokwahluka.
Inkonzo yethu ekwi-intanethi yenza ukuba abasebenzisi basombulule uninzi lweengxaki zobuqu:
Ukoyisa izakhiwo. Iintloni kunye nokusilela kwezakhono zonxibelelwano zenza ubomi bube nzima kakhulu. Ingxoxo yethu yevidiyo inceda ukuzithemba, funda ukungena ngokulula kwincoko, gcina incoko nabantu ongabaziyo kunye nokudlala ngothando. Ukwaziswa kokungaziwa, ukwahlula kwi-interlocutor ngescreen sokujonga, kunye nokukwazi ukuphazamisa incoko nangaliphi na ixesha kunika imvakalelo yokuziva ukhuselekile kwaye ikuvumela ukuba uzive ukhululekile kwaye ukhululekile.
Ukufumana isibini. Ingxoxo yeRoulette kunye namantombazana ikunika ithuba lokuseka igama elingenalo igama, ubudlelwane obumnandi kwi-Intanethi, ukukhula kwayo kuya kuxhomekeka kuwe kuphela. Mhlawumbi uya kuthandana kakhulu kangangokuba uthathe isigqibo sokuxoxa ngaphandle kweintanethi. Kwabaninzi, incoko yethu yevidiyo iye yaba yindawo yokudibana nothando lokwenene.
Inkxaso yezengqondo. Ngomzuzu onzima, xa kungekho mntu umthandayo kufutshane, akukho lula ukumelana neengxaki ozifumene wedwa. Kwiimeko ezinjalo, nomntu ongamaziyo angawuthulula umphefumlo wakhe, kwaye inkxaso yokuziphatha kunye neengcebiso ezilungileyo ezivela kumntu ongamaziyo zinokuba luncedo kakhulu.
Indlela yokufumana abahlobo abatsha kwi-chat roulette
Kulula ukudibana, ukuba nezincoko, ukuqala ubudlelwane kwincoko yevidiyo. Sukucaphuka xa umnxibelelanisi ephazamisa incoko kuqala: akunakwenzeka ukukholisa wonke umntu. Ingxoxo yethu yevidiyo kunye namantombazana ikunika ithuba lokunxibelelana namawakawaka abantu. Zama ukubonakala unobuhlobo, ucocekile, ulungile, unobuqili, uyamamela lowo unxibelelana naye, kwaye ngokuqinisekileyo uya kudibana nomntu onomdla onyanisekileyo kuwe.
Yiba nobuhlobo, ungathandabuzi ukuba ube ngowokuqala ukunxibelelana- kwaye abantu abatsha abanomdla nabaluncedo baya kuvela ebomini bakho!
Incoko yevidiyo RF © 2018
Ingxoxo yevidiyo edumileyo yaseRussia!
Ngaba ufuna iimvakalelo eziqaqambileyo kunye nolonwabo ekuthandaneni? Sonwabile ngendlela engathethekiyo ukubonelela ngencoko yevidiyo yamva nje, efanelekileyo-eyoyikekayo, ejolise ngqo ekufumaneni abantu abacinga ngokufana kunye nokuchitha ixesha kwi-Intanethi. Ingcali yethu engaphakathi endlwini ibhale uyilo olunomdla: ine-interface efanelekileyo, esebenzayo. Ukunyanzeliswa kolawulo-kuyakuvumela ukuba uchithe ixesha elinomdla kwi-dock engabonakaliyo kunye nabahlobo bakho okanye abantu obaqhelileyo.
Kunyaka ngamnye, ukuthandwa kwemithombo kuyanda ngenxa yokubonelelwa kwezixhobo zonxibelelwano. Vumelana - kulula, ngokuqinisekileyo kuyafikeleleka ngokuziphatha kakuhle kubo bonke abantu, ukuba kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi, ngaphandle kokuvuka kwindawo yokusebenza (ikhompyuter) okanye ilaptop. Kufuneka kuqatshelwe ukuba utyalomali olukhulu lwemali aludingeki. Njengomthetho, kuthathwa intlawulo kusetyenziswa iinkonzo zonxibelelwano, inkonzo yengxoxo yevidiyo. Imali encinci yokuchitha ayinakuthelekiswa nohambo lokuya kuphela ngeminibhasi.
Inkampani yethu sele idale isicelo seVKontakte apho abantu abaninzi beza kuncokola. Ngaba kulungile ngokwenene ukufumana izihlobo kuthethathethwano ngokucinezela isitshixo sebhere? Kwaba lula ukukhangela isathelayithi. Inkqubo yenziwe lula kakhulu - ukuze ufumane iqabane lomphefumlo ngaphandle kokushiya igumbi lakho, ngoku unokufumana uncedo olukhethekileyo. Yonke "inkqubo" inokwenziwa ngokusebenzisa iiarhente zomtshato zolu hlobo, kwaye ngokuthe ngqo- ngokubandakanya. Yonke imihla, abasebenzisi bewebhu kwihlabathi liphela bafumana ukujonga ezinye izingxoxo, kodwa abanakuqhayisa ngabaphulaphuli abaninzi okanye izixhobo zobugcisa. Le ngxoxo yevidiyo, kunye nebhlog yonxibelelwano elula, kunye nezinye izingxoxo.
Ithetha ntoni incoko yevidiyo kunye neqabane eliqhelekileyo? Awuyi kudibana nabantu abadlulayo kuphela, kodwa nabantu bakho abathanda izinto ezifanayo. Kwakhona, ezi nkonzo zibonelelwa yi-thematic: incoko yabaqhubi beemoto, egxile kwimixholo yolutsha, iqonga labadala, isizukulwana esiphakathi kunye nabanye.
Ukuqhelana kakuhle kwincoko yevidiyo yaseRussia!
Uve nge-100% amabinzana: "Badibana kwividiyo kwaye batshata emva konyaka", okanye umzekelo: "umhlobo wakhe osenyongweni wadibana naye". Uninzi lweemanyano ezinobuntu, zothando ziphinda zenziwe zisebenzisa iWebhu yeWebhu yeHlabathi, nangona abantu abaninzi, bezamile ukuqala ubudlelwane ngoluhlobo kwaye kwangaxeshanye, besilele, balahla eli phulo ngonaphakade. Ke iqala ngaphi ixesha elifanelekileyo, amaxesha okuphumelela kakhulu kwingxoxo yevidiyo iqala?
Phambi kokuba uqale, ufuna ukuyithetha, eyona nto iphambili ngabantu abaphikelelayo, kuba baninzi abantu abazana nabo nge-roulette yencoko-baneentloni, ngamanye amaxesha banokungazithembi kancinci, mhlawumbi abanayo iminqweno emikhulu. Xa sele ucinge kakuhle, kubalulekile ukuba uye kweli nqanaba, kodwa ke gcina engqondweni ukuba ukusukela ekuqaleni uthethe ingxelo-uyakufakwa amanqaku adwelisiweyo. Bangaphi abantu - izimvo ezininzi, iminqweno ... Emva kwayo yonke loo nto, kukho umntu ofuna ukudibana nabantu abo bahlukileyo? Ungalahl 'ithemba ngoko nangoko.
Kulula kakhulu ukwaphula le stereotype. Emva kokuphumelela amanqanaba athile, nayiphi na imbalelwano isondela ekuxoxeni ngentlanganiso yabathathi-nxaxheba. Ukuba ifika kuloo nto, inyathelo kufuneka livele kuwe. Sebenzisa le ntshukumo-bonisa ukuzimisela, unyamezelo.
Kubalulekile ukuba wazi umgangatho: Khohlwa malunga nokusebenzisa amabinzana efomula. Kuyinyani, okwahlukileyo kunokubandakanya ezo meko xa umnxibelelanisi ethathe isigqibo sokuzisebenzisa kuqala. Akukhathazi ukwenza ukuba imiyalezo yakho ibe yodwa kwaye inike umdla xa unxibelelana.
Khawufane ucinge nje okuncinci, omnye usenokuthi - uzicingele ngokwakho endaweni yalowo ukubonayo. Akukho sidingo sokuqala ubalo "olungenanto" kwaye ubonakale uhamba ze kufutshane nekhamera! Kuyimfuneko ukusondela kulo mbuzo ngembeko, ngokufanelekileyo. Zama ukuvelisa iingcinga ngokucinga, bhala ngokuchanekileyo. Emva kwayo yonke loo nto, oku kunokunyusa umdla kuwe.
Ukucinga kakuhle-eyona nto iphambili kuyo nayiphi na into efana nale:
- Ukunyaniseka. Zama ukunyaniseka kangangoko. Ukuba wenza idinga, umhlobo wakho angadana xa uthe waqhatha. Kule meko, iinzame ziya kuba lilize ...
Abantu abafumene ukuphoxeka okungathethekiyo - bambalwa kubo, kodwa bayahlangana kubomi bemihla ngemihla. Rhoqo iimpikiswano eziboniswa ngaba bantu zezi: "kwi-Intanethi, wanxibelelana ngokwahlukileyo nam ...". Ukuba awufuni ukuba i-verbiage ikukhathaze-nyaniseka, mhlawumbi uthobekile kancinci, ewe akufuneki wophule imithetho yengxoxo yevidiyo yaseRussia Videoruletka.in.ua!
Yenza izipho ezintle ngokuthenga iingqekembe.
Ngaba ukulungele ukuzama izipho? Oku kuthetha ukuba ufumene isifundo esifanelekileyo kwiholide edibeneyo kwaye kuya kufuneka uthenge ityala langaphakathi usebenzisa usetyenziso olunikezwe yiBadanga Ltd. Ukuba ufuna ingcebiso- iRussia roulette yengxoxo yevidiyo "Videoruletka" icebisa ukonyusa ibhalansi yakho ngeWebMoney, iQiwi, imali yeYandex, naliphi na ikhadi leBhanki. Ngasentla, kukho ukhetho olufanelekileyo ngokulandelelana, kuba iingqekembe ezili-10 (iintsuku ezingama-20 zonxibelelwano, ukuba kwangaxeshanye uzama ukunganiki izipho ngokusuka entliziyweni) usebenzisa ezi nkqubo zekhompyuter zingentla- $ 10. Ezi zezona ndlela zikhuselekileyo, ezinenzuzo kakhulu, nezilula, ekungayi kubakho mibuzo kuzo.
Ukuhlawula i-SMS, ukuthumela kuya kwinani elifutshane elifutshane. Kubaluleke kakhulu ukuzuza ibhalansi yangaphakathi kweli nqanaba. Le ziinkozo ezi-4 kuphela zerhafu. Kuxhomekeke kumsebenzisi. Ngeedola ezili-10, kunokubakho iingqekembe ezilishumi, ezizaliswe ngekhadi lebhanki. Uninzi lwazo luhlawula ngoluhlobo ngenxa yesantya kunye nakwiselfowuni iakhawunti ihlala igcwaliswa ngokutsha. "IVideoruletka" yenze isifaniso, emisele ukuba ukuhlawula ngenani elifutshane, ukuthumela iSMS akunoncedo, emva kokuthumela umyalezo omfutshane - isiqingatha semali - kususwe ngumnxibelelanisi wefowuni. Nantsi ke ingxaki yokwenyani yembuyekezo etyhilwe kwi-4, hayi ishumi leenkcitho zenkcitho enzulu. Ukulungiselela okuphezulu.
Yenzeka njani ingxoxo yevidiyo?
Ukusukela kwixesha lokuzalwa kwe-Intanethi, sihamba phambili ngokukhawuleza kwinkqubela phambili yesayensi kunye netekhnoloji kwicandelo lonxibelelwano lweetekhnoloji zekhompyuter. Uninzi luzamile ukwenza olu hlobo lwengxoxo olunokunceda ukudibana kwi-Intanethi, nokuba kungcono ukubonana. Nceda uqaphele ukuba yonke into iyenzeka ngexesha lokwenyani. Ngokwendalo, okwesihlandlo sokuqala, uphuhliso lwabonakala kurhulumente, isoftware enjalo ayinakuthelekiswa nanto, yahlelwa; zisetyenziswe kuvavanyo olwahlukeneyo kunye nokusebenza kukarhulumente. inqanaba. Umntu wokuqala "onobuhlobo" wazalwa emva phayaa ngo-1988, kwathiwa "yingxoxo yokudlulisa i-Intanethi". Ewe, into entsha enjalo ebaleni: i "World Movement" yakhawuleza yathandwa. Le ntambo intsha isebenze njengesiseko sokwakha amagumbi okuncokola kwi-Intanethi.Yakha ngokukodwa isiseko sokwakhiwa kwengxoxo yevidiyo. Emva kohlaziyo, uphuculo kunye nophuculo lwezixhobo ezisebenzayo ezibhalwe ngabaphuhlisi bobuchwephesha, naluphi na undwendwe lwesoftware yamva nje lunokunxibelelana kuzo zonke iintlobo zeencoko ngaphandle komzamo.
Ekuqhubekeni kwale software, iintlobo ezikhoyo ngoku sele zenziwe. Ngenxa yesidingo somfanekiso "ophilayo", bekukho isidingo sokwenza isixhobo esingaqhelekanga-ikhamera yewebhu. Ngethuba lokuqala, le gadget, okanye unokuthelekisa "isixhobo", yayineminyaka emithathu emva kokuvela kweenkqubo, oko kukuthi, ngo-1991 (kule mihla, phantse yonke imishini yokucinga ixhotyiswe ngale nto). Ukuyilwa kwezinto kuye kwavumela wonke umntu ofuna ukwenza umlambo namhlanje kwaye ancokole nabantu abazingelayo okanye, ngokuchaseneyo, khangela abantu abangaziwayo ngaphandle kokushiya ikhaya. Sivakalisa ngesibindi ukuba abasebenzisi bencoko yevidiyo bayabulela kule ndlela incinci njengekhamera yewebhu. Masabelane ngayo ngekhamera yewebhu- enkosi!
Ukuba ucinga ngako, incoko yevidiyo eqhelekileyo ikwinkokeli phakathi kwamanqaku afanayo otshintshiselwano ngolwazi ngokuthumela amagama. Unokucinga ngomntu, umve enesakhono sokubhala, ukuthetha, ukuziva-ehleli ekhaya. Ngoku makhe sijonge izibonelelo ngokulandelelana kwazo. Isidima esibonakalayo kukubona! Unokucinga ngomchasi wakho. Xa ukwingxoxo esemgangathweni okanye kwiindawo ezifanayo ezithandwayo zokuthandana, ukuba unethamsanqa- uyavuya ukubona ifoto (okanye umfanekiso, awukhutshelwa ngaphandle) -Uyayibona le nto kwaye uqinisekile ukuba utolika nabani. Kukho intabalala yemizekelo, esicinga ukuba ayizizo iindaba, xa iindwendwe zithatha iifoto zabanye abantu, kodwa kukho imifanekiso yeenkwenkwezi esingazaziyo. Ewe kunjalo, kunzima ukukhuthaza isenzo sabanye abantu, ukuqonda eyona njongo -yokwethu le nto ayichazeki,Nangona kunjalo, ukuphoxeka kwiziphumo zangaphambili kunye nomngeneleli onjalo kuyacaca. Vumelana-ngelixa sinxibelelana, sele silucingile undwendwe, ngemibala eyahlukeneyo njengoko ufuna, ngokusekwe kumfanekiso wolwazi loluntu ... isimilo, indlela ... Kulisikizi ukufumanisa kamva ukuba akabonakali umntu oboniswe emfanekisweni. Ndicinga ukuba kubuhlungu kakhulu ukunyamezela into yokuba ukucinga ngokuhlala kunye nomntu, malunga nabuphi na ubudlelwane obunoncedo, uya kufumanisa isini kwaye ayichasananga neyakho! Zama ukuthelekelela imeko yomntu othukileyo, odanileyo wentsomi yakhe, owafunda ukuba emva kothethathethwano olude ngoncedo lwamajelo okudlulisa idatha, amava amakhulu emiyalezo kunye neqela leemvakalelo ezintle ... Ukhetho lwalungumhlaseli wesini esahlukileyo. Andingethandi ukuba kwimeko enjalo - ayicacanga le nto.Vumelana-ngelixa sinxibelelana, sele silucingile undwendwe, ngemibala eyahlukeneyo njengoko ufuna, ngokusekwe kumfanekiso wolwazi loluntu ... isimilo, indlela ... Kulisikizi ukufumanisa kamva ukuba akabonakali umntu oboniswe emfanekisweni. Ndicinga ukuba kubuhlungu kakhulu ukunyamezela into yokuba ukucinga ngokuhlala kunye nomntu, malunga nabuphi na ubudlelwane obunoncedo, uya kufumanisa isini kwaye ayichasananga neyakho! Zama ukuthelekelela imeko yomntu othukileyo, odanileyo wentsomi yakhe, owafunda ukuba emva kothethathethwano olude ngoncedo lwamajelo okudlulisa idatha, amava amakhulu emiyalezo kunye neqela leemvakalelo ezintle ... Ukhetho lwalungumhlaseli wesini esahlukileyo. Andingethandi ukuba kwimeko enjalo - ayicacanga.Vumelana-ngelixa sinxibelelana, sele silucingile undwendwe, ngemibala eyahlukeneyo njengoko ufuna, ngokusekwe kumfanekiso wolwazi loluntu ... isimilo, indlela ... Kulisikizi ukufumanisa kamva ukuba akabonakali umntu oboniswe emfanekisweni. Ndicinga ukuba kubuhlungu kakhulu ukunyamezela into yokuba ukucinga ngokuhlala kunye nomntu, malunga nabuphi na ubudlelwane obunoncedo, uya kufumanisa isini kwaye ayichasananga neyakho! Zama ukuthelekelela imeko yomntu othukileyo, odanileyo wentsomi yakhe, owafunda ukuba emva kothethathethwano olude ngoncedo lwamajelo okudlulisa idatha, amava amakhulu emiyalezo kunye neqela leemvakalelo ezintle ... Ukhetho lwalungumhlaseli wesini esahlukileyo. Andingethandi ukuba kwimeko enjalo - ayizicacisi.ukuthembela kwifoto yolwazi loluntu ... umlingiswa, indlela ... Kulizothe ukufumanisa kamva ukuba akabonakali njengomntu oboniswe emfanekisweni. Ndicinga ukuba kubuhlungu kakhulu ukunyamezela into yokuba ukucinga ngokuhlala kunye nomntu, malunga nabuphi na ubudlelwane obunoncedo, uya kufumanisa isini kwaye ayichasananga neyakho! Zama ukuthelekelela imeko yomntu othukileyo, odanileyo wentsomi yakhe, owafunda ukuba emva kothethathethwano olude ngoncedo lwamajelo okudlulisa idatha, amava amakhulu emiyalezo kunye neqela leemvakalelo ezintle ... Ukhetho lwalungumhlaseli wesini esahlukileyo. Andingethandi ukuba kwimeko enjalo - ayizicacisi.ukuthembela kwifoto yolwazi loluntu ... umlingiswa, indlela ... Kulizothe ukufumanisa kamva ukuba akabonakali njengomntu oboniswe emfanekisweni. Ndicinga ukuba kubuhlungu kakhulu ukunyamezela into yokuba ukucinga ngokuhlala kunye nomntu, malunga nabuphi na ubudlelwane obunoncedo, uya kufumanisa isini kwaye ayichasananga neyakho! Zama ukuthelekelela imeko yomntu othukileyo, odanileyo wentsomi yakhe, owafunda ukuba emva kothethathethwano olude ngoncedo lwamajelo okudlulisa idatha, amava amakhulu emiyalezo kunye neqela leemvakalelo ezintle ... Ukhetho lwalungumhlaseli wesini esahlukileyo. Andingethandi ukuba kwimeko enjalo - ayicacanga.Kubuhlungu ngakumbi ukunyamezela into yokuba ukucinga ngokuhlala kunye nomntu, malunga nabuphi na ubudlelwane obunoncedo, uya kufumanisa isini kwaye ayichasananga neyakho! Zama ukuthelekelela imeko yomntu othukileyo, odanileyo wentsomi yakhe, owafunda ukuba emva kothethathethwano olude ngoncedo lwamajelo okudlulisa idatha, amava amakhulu emiyalezo kunye neqela leemvakalelo ezintle ... Ukhetho lwalungumhlaseli wesini esahlukileyo. Andingethandi ukuba kwimeko enjalo - ayicacanga.Kubuhlungu ngakumbi ukunyamezela into yokuba ukucinga ngokuhlala kunye nomntu, malunga nabuphi na ubudlelwane obunoncedo, uya kufumanisa isini kwaye ayichasananga neyakho! Zama ukuthelekelela imeko yomntu othukileyo, odanileyo wentsomi yakhe, owafunda ukuba emva kothethathethwano olude ngoncedo lwamajelo okudlulisa idatha, amava amakhulu emiyalezo kunye neqela leemvakalelo ezintle ... Ukhetho lwalungumhlaseli wesini esahlukileyo. Andingethandi ukuba kwimeko enjalo - ayizicacisi.amava amakhulu emiyalezo kunye neqela leemvakalelo ezintle ezinamava ... ukubukela ukuba ukhetho (lwakhe) lwalungumhlaseli wesini esahlukileyo. Andingethandi ukuba kwimeko enjalo - ayizicacisi.amava amakhulu emiyalezo kunye neqela leemvakalelo ezintle ezinamava ... ukubukela ukuba ukhetho (lwakhe) lwalungumhlaseli wesini esahlukileyo. Andingethandi ukuba kwimeko enjalo - ayizicacisi.
Yeka! Sebenzisa iVidiyo yeIntanethi kunxibelelwano, unokuyiphepha ngokulula le mizuzu ingathandekiyo. Njengakwi-5D-imbalelwano, ukumisela unxibelelwano, ukuqaqamba kwabazana- kwenzeka kwindawo efudumeleyo kufutshane nenyani kangangoko kunokwenzeka. Ukufana kwangaphandle kuphambi kwakho, ke akukho nto inokudibanisa nengqondo eqeqeshiweyo kwaye ucinge ngeziganeko ezimbi. Uziphatha ngokonwaba, ngelixa uzithembile ngokupheleleyo, ukuba akunjalo ngokufana kwangaphandle, emva kokunyaniseka kweenjongo zomhlobo okanye umntu omaziyo.
Ingxoxo yevidiyo engaqhelekanga kunye nomgaqo wokuphunyezwa kwayo.
Ukuze usebenzise ingxoxo yevidiyo, udinga ezi zinto zilandelayo:
- okokuqala: ilaptop yakho kunye nokufikelela kwinethiwekhi (ukufumana umfanekiso ongcono kunye nencoko efanayo - ialgorithm yamkelwe: "isantya esiphakamileyo, kokumangalisa ngakumbi");